I-Probate, i-Wills, i-Trust kanye ne-Litigation Litigation - i-NJ & NY Real Estate, i-probate, i-Foreclosure Defense kanye nabameli be-Bankruptcy
Ikhaya / Probate, Wills Trust bezindlu Litigation
Njengommeli we-New Jersey Estate, sizokusiza ukuthi ngabe udinga ukunqoba i-Probate Litigation noma ulungiselele i-Will yakho ukuze umndeni wakho ukwazi ukugwema isimangalo ngokuzayo.
Emahhovisi oMthetho kaPatel, uSoltis, kanye neCardenas singasiza nganoma yiziphi izidingo zakho zefa. Abameli bethu bangakumela ezingxabanweni nge-will and trust, ukuphathwa kwempahla, noma ukumangalelwa okuthuthukile ku-Hudson County, Essex County, Union County, Bergen County, Mercer County, Monmouth County, Morris County, Passaic County, Somerset County, noma Middlesex County .
Imaphi Amaphuzu Asetha Isigaba Sokuthi Cishe Uvele?
Yiziphi Ezinye Izinkinga Ezivamile Ezingavela Ngesikhathi Senkambiso Yesivumelwano?
Ngabe Ngidinga Ummeli We-Probate or Trust Litigation?
Siyi-Full-Service Probate Litigation kanye ne-Estate Disputes Law Firm Ezinze eJersey City, NJ ngaphesheya koMgwaqo kusukela Hudson County Surrogate
Izinkinga Zokubulala (Lapho umuntu efa ngaphandle kwemvume)
Izimpikiswano (Ngabe intando efakwe ngenkohliso, noma etholwe ngayo Ithonya Lokungafanele?
Izinselele zeTestamente (Izizathu zokuphonsela inselelo intando efana nokuntula kwamandla okwenza umyolelo, kwenziwa enye nokunye.)
I-Fiduciary Malfeasance / ukungaziphathi kahle (Ngabe umkhondli noma umabi wefa ontshontsha impahla
Ukukhishwa kwe-Fiduciary (Qamba omunye umuntu ngokuthi ngumkhuzi kanye / noma umphathi.)
Ukuqapha kanye nokugada
Izikhalazo Zentela kanye Nentela
Izimpikiswano zefa (Lapho wonke umuntu engahlangani kwesinye isikhathi nokuba nommeli isenzo sompempe kuyadingeka.
Inani kanye nokusatshalaliswa kwezimpahla
Izenzo ze-accounting (Sine-CPA efundisa amanye ama-CPA ukuthi angaphathwa kanjani ama-estates.)
Izinhlobo zamacala esiphathelene nabameli bethu be-NJ probate litigation abandakanya ubuqola kanye nokubanjwa, ukuthonya okungafanele kanye nokuntuleka kwamandla okuqina. Akujwayelekile ukuthi umuntu ocabanga ukuthi angumngane omethembayo azame ukukusebenzisa ithuba uma ebona imali entanjeni.
Our Abameli Abasebenza Ezezakhiwo eJersey City kuhlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme kakhulu neziphendulayo kwekhasimende ngalinye. Ingxabano yakho yefa lakho ingaxazululwa ngokumangalelwa noma ngokuxoxisana futhi kunoma yikuphi, sizokulwela. Siyaqonda ukuthi ukulahlekelwa umuntu esimthandayo kungaba yisikhathi esikhokhiswa kakhulu ngokomzwelo nokuthi lokhu kwenezela ingcindezi eyengeziwe kuwo wonke umuntu. Sisebenzela ukuqinisekisa ukuthi amaklayenti ethu aphathwa ngenhlonipho. Silalele izidingo zakho njengamakhasimende ethu, futhi asikaze sikubone ungumuntu nesimo ohlangabezana naso. Uma udinga usizo ngokuthengisa ingcebo yendawo singabona ukuthi uthola imali eningi kakhulu yendawo futhi uvikele nefa ngokusebenzisa enye yethu NJ Izakhiwo Zokuvala Izakhiwo Zendlu.
Abameli babameli eNew York naseNew York ngaphesheya kweNkantolo Yezindlu e-Hudson County, NJ; I-Bergen County, NJ; kanye neKings County, NY.
Sinikeza imihlangano yamasu okuqala MAHHALA ukuze udlule lokho okudingeka ukwenze nokuthi yini esingasiza ngayo. Sinezikhathi eziguqukayo zokuhlangana nawe ngemuva kokuphuma emsebenzini, noma ngaphambi kokuqala kosuku lwakho, noma ngisho nangezimpelasonto uma leso kuphela isikhathi onokuthi uhlangane ngaso. Kuya ngesimo, singaphatha impikiswano yakho nge-probate on a emergencygency basis, okusho ukuthi awukhokhisi imali yezomthetho ngaphandle kokuthi siwina impikiswano yakho.
Xhumana nehhovisi lethu ukuze ukhulume nommeli we-probate eNew Jersey nokuthi singakusiza kanjani ku (844) 533-3367 noma usithumele i-imeyili ku [Email protected].